July 2020 - Page2of 37 - ShwengweGames
ဘာသာပြန် – ဗန်းမော်သိန်းဖေ၊အိန္ဒိယနိုင်ငံကဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုပါ။အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ်ကေဆူဒါကရန်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာကန်ဟန်ဂတ်မြို့လေးက စျေးထဲမှာဆိုင်လေးတစ်ခုဖွင့်ပြီးစျေးရောင်းတယ်။
သူ့ဆိုင်လေးမှာချိုချဉ်၊အအေးနဲ့ ထီလက်မှတ်တွေရောင်းတယ်။သူ့ဆိုင်ကနေ တစ်လကိုရူပီငွေ ၁၀,၀၀၀ (ကျပ်တစ်သိန်း ၂ သောင်း) လောက်တော့ ပုံမှန်လေးရနေပါတယ်။တမနက်ခင်းမှာသူ့ဆိုင်မှာ ဝယ်နေကျ
ဖေါက်သယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ပီအရှိုကန်ကသူ့ဆီကိုဖုန်းဆက်ပြီးထီလက်မှတ် ၁၀ စောင်ဖယ်ထားပေးပါ။နောက်တနေ့မနက်မှာလာယူမယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီညနေမှာထီဖွင့်လို့ဆူဒါကရန်ကထီတိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။
အရှိုကန်ဝယ်ဖို့ဖယ်ခိုင်းထားတဲ့ထီလက် မှတ် ၁၀ စောင်ထဲကတစ်စောင်ဟာ ထီပေါက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ ပေါက်တဲ့ဆုကပထမဆုကြီး။ ရူပီငွေ ၁၀ သန်း(ကျပ်သိန်း ၁,၈၀၀)။
ဖုန်းဆက်ပြောလိုက်လို့ပြန်ပြောလာတယ်။သူ ချက်ခြင်းအရှိုကန်ဆီဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားလိုက်တယ်။အရှိုကန် ရောက်လာပြီးသူ့ရဲ့ရိုးသားမှုကိုအံ့သြချီးကျူးမဆုံးဖြစ်သွားတယ်။
သူ့အနေနဲ့ အဲဒီပေါက်တဲ့ထီလက်မှတ်ကို ထီမပေါက်တဲ့လက်မှတ်တစ်စောင်နဲ့ လဲထားလိုက်ရင်လည်းဘယ်သူမှမသိပါဘူး။တရားဥပဒေအရလည်းသူ့ဟာဘာမှ ငြိစွန်းမှုမရှိပါဘူး။
သူ့ကို အဲဒီလိုဘာကြောင့်လုပ်ရတာလဲလို့ မေးကြည့်တော့သူကခုလို ဖြေပါတယ်။ “ကျနော့်အဖေကကျနော်ငယ်ငယ်လေးကတဲကပြောနေကျစကားတစ်ခုရှိတယ်။ မင်းမှာပိုက်ဆံမရှိရင်တောင်းစား။
ရဲကစုံစမ်းပြီးပိုင်ရှင်ကို ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဆူဒါကန်ဟာ ထီဆုကြီးမယူလို့ သူ့ဘဝဟာချောင်ချောင်လည်လည်ရှိရဲ့လား။သူ့မှာကလေး ၆ ယောက် ရှိတယ်။ သမီးတစ်ယောက်ကမသန်စွမ်းဖြစ်နေတယ်။
သူ့ဆိုင်ခန်းကိုငှားထားရတာပါ။မနက်တိုင်း ၄ နာရီခွဲထပြီးသူ့ရွာကနေ သူ့ဆိုင်ရှိတဲ့ ကန်ဟန်ဂတ်မြို့ကို ၂ နာရီကြာ ရထားစီးသွားရတယ်။သူဟာတပတ်လုံး တစ်ရက်မှအနားမယူဘဲစျေးရောင်းရတယ်။
မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် ကြိုးစားရုန်းကန်နေရတယ်။ရိုးသားမှုဟာ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာဒိုင်နိူဆောသတ္တဝါကြီးလို ပျောက်ကွယ်သွားပြီလို့ထင်နေမိတာဒီသတင်းဖတ်လိုက်ရတော့လည်းသြော် ရှိပါသေးလားလို့ တွေးရင်းရင်အေးမိပါတယ်။
ဆင္းရဲေပမဲ့ ရိုးသားသည့္ စိတ္ဓာတ္ကိုသက္ေသျပလိုက္တဲ့ အိႏၵိယနိုင္ငံက ျဖစ္ရပ္မွန္တစ္ခု
ဘာသာျပန္ – ဗန္းေမာ္သိန္းေဖ၊အိႏၵိယနိုင္ငံကျဖစ္ရပ္မွန္တစ္ခုပါ။အသက္ ၄၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ေကဆူဒါကရန္ဆိုတဲ့လူတစ္ေယာက္ဟာကန္ဟန္ဂတ္ၿမိဳ႕ေလးက ေစ်းထဲမွာဆိုင္ေလးတစ္ခုဖြင့္ၿပီးေစ်းေရာင္းတယ္။
သူ႕ဆိုင္ေလးမွာခ်ိဳခ်ဥ္၊အေအးနဲ႕ ထီလက္မွတ္ေတြေရာင္းတယ္။သူ႕ဆိုင္ကေန တစ္လကို႐ူပီေငြ ၁၀,၀၀၀ (က်ပ္တစ္သိန္း ၂ ေသာင္း) ေလာက္ေတာ့ ပုံမွန္ေလးရေနပါတယ္။တမနက္ခင္းမွာသူ႕ဆိုင္မွာ ဝယ္ေနက်
ေဖါက္သယ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ပီအရွိုကန္ကသူ႕ဆီကိုဖုန္းဆက္ၿပီးထီလက္မွတ္ ၁၀ ေစာင္ဖယ္ထားေပးပါ။ေနာက္တေန႕မနက္မွာလာယူမယ္လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ အဲဒီညေနမွာထီဖြင့္လို႔ဆူဒါကရန္ကထီတိုက္ၾကည့္လိုက္တယ္။
အရွိုကန္ဝယ္ဖို႔ဖယ္ခိုင္းထားတဲ့ထီလက္ မွတ္ ၁၀ ေစာင္ထဲကတစ္ေစာင္ဟာ ထီေပါက္ေနတာကိုေတြ႕လိုက္ရတယ္။ ေပါက္တဲ့ဆုကပထမဆုႀကီး။ ႐ူပီေငြ ၁၀ သန္း(က်ပ္သိန္း ၁,၈၀၀)။
ဖုန္းဆက္ေျပာလိုက္လို႔ျပန္ေျပာလာတယ္။သူ ခ်က္ျခင္းအရွိုကန္ဆီဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားလိုက္တယ္။အရွိုကန္ ေရာက္လာၿပီးသူ႕ရဲ႕ရိုးသားမႈကိုအံ့ၾသခ်ီးက်ဴးမဆုံးျဖစ္သြားတယ္။
သူ႕အေနနဲ႕ အဲဒီေပါက္တဲ့ထီလက္မွတ္ကို ထီမေပါက္တဲ့လက္မွတ္တစ္ေစာင္နဲ႕ လဲထားလိုက္ရင္လည္းဘယ္သူမွမသိပါဘူး။တရားဥပေဒအရလည္းသူ႕ဟာဘာမွ ၿငိစြန္းမႈမရွိပါဘူး။
သူ႕ကို အဲဒီလိုဘာေၾကာင့္လုပ္ရတာလဲလို႔ ေမးၾကည့္ေတာ့သူကခုလို ေျဖပါတယ္။ “က်ေနာ့္အေဖကက်ေနာ္ငယ္ငယ္ေလးကတဲကေျပာေနက်စကားတစ္ခုရွိတယ္။ မင္းမွာပိုက္ဆံမရွိရင္ေတာင္းစား။
ရဲကစုံစမ္းၿပီးပိုင္ရွင္ကို ျပန္ေပးလိုက္ပါတယ္။ဆူဒါကန္ဟာ ထီဆုႀကီးမယူလို႔ သူ႕ဘဝဟာေခ်ာင္ေခ်ာင္လည္လည္ရွိရဲ႕လား။သူ႕မွာကေလး ၆ ေယာက္ ရွိတယ္။ သမီးတစ္ေယာက္ကမသန္စြမ္းျဖစ္ေနတယ္။
သူ႕ဆိုင္ခန္းကိုငွားထားရတာပါ။မနက္တိုင္း ၄ နာရီခြဲထၿပီးသူ႕႐ြာကေန သူ႕ဆိုင္ရွိတဲ့ ကန္ဟန္ဂတ္ၿမိဳ႕ကို ၂ နာရီၾကာ ရထားစီးသြားရတယ္။သူဟာတပတ္လုံး တစ္ရက္မွအနားမယူဘဲေစ်းေရာင္းရတယ္။
မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေနရတယ္။ရိုးသားမႈဟာ ယေန႕ကမာၻေပၚမွာဒိုင္နိူေဆာသတၱဝါႀကီးလို ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီလို႔ထင္ေနမိတာဒီသတင္းဖတ္လိုက္ရေတာ့လည္းေၾသာ္ ရွိပါေသးလားလို႔ ေတြးရင္းရင္ေအးမိပါတယ္။
ငွေမကုန်ဘဲ အသည်းမှာရှိတဲ့အဆိပ်အပုပ်တွေဆေးနိုင်သည့် ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးနည်း
ငွေမကုန်ပဲ အသည်းဆေးနိုင်သည့် တိုင်းရင်းဆေးနည်းလေးကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်နော်
တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်အဆိပ်အပုပ်ထုတ်တဲ့အစီအစဉ်အရအခုအပတ်မှာ အလှည့်ကျတာကတော့အသည်းကိုဆေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာအသည်းဟာအ ရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်သလို အလုပ်အများဆုံးသောကလီစာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်အသည်းကောင်းဖို့သိပ်အရေး ကြီးပါတယ်။အသည်းကိုဆေးဖို့အ ကောင်းဆုံးကတော့ မန်ကျည်းဖျော်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ မန်ကျည်းသီးဟာအသည်းအတွက် သဘာဝကပေးထားတဲ့ဆေး လည်းဖြစ်ပါတယ်။
အသည်းကိုနုပျိုစေပါတယ်။အသည်းခြောက်ခြင်း၊ကျုံ့ခြင်း၊ကြွပ်ခြင်း၊ ဆတ်ခြင်း၊ပုပ်ခြင်းတွေ မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။အခုခေတ်မှာ Bပိုး Cပိုး Hပိုး စသည်ဖြင့်ဖြစ်ကြတာဟာအသည်းပုပ်လို့ပါ။ပိုးဆိုတာပုပ်မှတွယ်တာပါ။ မပုပ်ရင်မတွယ်ပါဘူး။
အဲ့လိုပိုးမတွယ်အောင်အသည်းကို ဆေး ကြောပေးဖို့လိုပါတယ်။ ရိုးရိုးလေးပါပဲ၊ မန်ကျည်းဖျော်ရည်သောက်ပေးရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။မန်ကျည်းမှည့်လက်တစ်ဆုပ်၊ ထန်းလျက်သင့်ရုံ၊ ဆားအနည်းငယ်ကိုမတ်ခွက်ထဲမှာထည့်ပြီး ရေနွေးဆူကိုလောင်းထည့်ပါ။
မနက်ထဲကနှပ်ထားရင်ညနေဆိုသောက်လို့ရပါပြီ။ဆန်ကာနဲ့စစ်လိုက်ရင် အရသာရှိတဲ့မန်ကျည်းဖျော်ရည်ကိုရပြီပေါ့။သံ ပရာသီးကြိုက်ရင်ညှစ်ထည့်၊ အေးအေးလေးသောက်ချင်ရင်ရေခဲထည့်သောက်ပါ။
Writer ;Happy and Lucky
Source ; Min Kyaw Win
ေငြမကုန္ဘဲ အသည္းမွာရွိတဲ့အဆိပ္အပုပ္ေတြေဆးနိုင္သည့္ ရိုးရာတိုင္းရင္းေဆးနည္း
ေငြမကုန္ပဲ အသည္းေဆးနိုင္သည့္ တိုင္းရင္းေဆးနည္းေလးကို ျပန္လည္မွ်ေဝလိုက္ရပါတယ္ေနာ္
တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္အဆိပ္အပုပ္ထုတ္တဲ့အစီအစဥ္အရအခုအပတ္မွာ အလွည့္က်တာကေတာ့အသည္းကိုေဆးဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ခႏၶာကိုယ္မွာအသည္းဟာအ ေရးႀကီးတဲ့အဂၤါတစ္ခုျဖစ္သလို အလုပ္အမ်ားဆုံးေသာကလီစာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္အသည္းေကာင္းဖို႔သိပ္အေရး ႀကီးပါတယ္။အသည္းကိုေဆးဖို႔အ ေကာင္းဆုံးကေတာ့ မန္က်ည္းေဖ်ာ္ရည္ျဖစ္ပါတယ္။ မန္က်ည္းသီးဟာအသည္းအတြက္ သဘာဝကေပးထားတဲ့ေဆး လည္းျဖစ္ပါတယ္။
အသည္းကိုႏုပ်ိဳေစပါတယ္။အသည္းေျခာက္ျခင္း၊က်ဳံ႕ျခင္း၊ႂကြပ္ျခင္း၊ ဆတ္ျခင္း၊ပုပ္ျခင္းေတြ မျဖစ္ေအာင္ကာကြယ္ေပးပါတယ္။အခုေခတ္မွာ Bပိုး Cပိုး Hပိုး စသည္ျဖင့္ျဖစ္ၾကတာဟာအသည္းပုပ္လို႔ပါ။ပိုးဆိုတာပုပ္မွတြယ္တာပါ။ မပုပ္ရင္မတြယ္ပါဘူး။
အဲ့လိုပိုးမတြယ္ေအာင္အသည္းကို ေဆး ေၾကာေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ရိုးရိုးေလးပါပဲ၊ မန္က်ည္းေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ေပး႐ုံပဲျဖစ္ပါတယ္။မန္က်ည္းမွည့္လက္တစ္ဆုပ္၊ ထန္းလ်က္သင့္႐ုံ၊ ဆားအနည္းငယ္ကိုမတ္ခြက္ထဲမွာထည့္ၿပီး ေရေႏြးဆူကိုေလာင္းထည့္ပါ။
မနက္ထဲကႏွပ္ထားရင္ညေနဆိုေသာက္လို႔ရပါၿပီ။ဆန္ကာနဲ႕စစ္လိုက္ရင္ အရသာရွိတဲ့မန္က်ည္းေဖ်ာ္ရည္ကိုရၿပီေပါ့။သံ ပရာသီးႀကိဳက္ရင္ညွစ္ထည့္၊ ေအးေအးေလးေသာက္ခ်င္ရင္ေရခဲထည့္ေသာက္ပါ။
ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ကမ္ဘာပတ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်ကို မြှင်တင်ခဲ့သော ကမ္ဘာလှည့် တင်တင်စိန် ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်း
ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ကမ္ဘာပတ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်ကို မြှင်တင်ခဲ့သော ကမ္ဘာလှည့် တင်တင်စိန် ကွယ်လွန်
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၆၀ က အာရှတွင် ပထမဆုံးအဖြစ် BSA မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ မိုင်ပေါင်း ငါးသောင်းကျော် တစ်နှစ်ကြာ စွန့်စားခရီးသွား ကမ္ဘာပတ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်ကို မြှင်တင်ခဲ့သော ကမ္ဘာလှည့် တင်တင်စိန်သည် ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက် ည ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် သီလရှင်ဘဝဖြင့် တိမ်းပါး ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
အသက် ၁၈ နှစ်မှာ ဆိုင်ကယ်စီးပြီး ကမ္ဘာပတ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့အမျိုးသမီး မတင်တင်စိန်ရဲ့အကြောင်းကို ဗဟုသုတရစေရန်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
အသက် ၁၈ နှစ်မှာ ဆိုင်ကယ်စီးပြီး ကမ္ဘာပတ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့အမျိုးသမီး မတင်တင်စိန်ဟာ ဆယ်တန်းကို ဘာသာစုံဂုဏ်ထူး ခုံနံပါတ် ၁ (သရက်မြို့နယ်)နဲ့ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၃ ခုနှစ်မှာ သရက်မြို့ရဲ့ မယ်လည်း ဖြစ်ခဲ့သူပါ။လွန်ခဲ့တဲ့ ၆၃ နှစ် ၁၉၅၅ ခုနှစ်ကာလမှာ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် မြန်မာအမျိုးသမီးလေးဟာ သူ့အမျိုးသားနဲ့အတူ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ ကမ္ဘာ့ပတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေ ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်တဲ့အထိ အံ့သြသွား ကြမှာပါ။
မြန်မာ့ပထမဆုံး မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ ကမ္ဘာပတ်ခဲ့တဲ့ အဘွားတင်တင်စိန်နဲ့အဘိုးဦးဘတုတ်တို့နှစ်ဦးဟာ မြန်မာနိုင်ငံကနေအင်္ဂ္လန်နိုင်ငံအထိအရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဖြတ်ကာအချိန်တစ်နှစ်ကျော်ကြာမိုင်ပေါင်း ၅၀ဝဝဝ ကျော် သွားခဲ့ကြတာပါ။အဲဒီခရီးစဉ်မှာ ဥရောပနိုင်ငံတွေ အကုန်ရောက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၃၅ ကိုလည်း ဖြတ်ကျော်လည်ပတ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။သူတို့ရဲ့ ကမ္ဘာပတ်သတင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့Nation သတင်းစာအပါအဝင်သူတို့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများကသတင်းစာတွေမှာ ဖော်ပြခံခဲ့ရပြီးခရီးစဉ်တစ်လျှောက် နိုင်ငံတွေရဲ့အကြီးအကဲတွေဖြစ်တဲ့သမ္မတ၊ဝန်ကြီး၊ဝန်ကြီးချုပ်၊ဘုရင်စတာတွေကလည်းသူတို့ကို လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
၁၉၅၅ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၅၆ ခုနှစ်အထိ တစ်နှစ်ကျော်ကြာ ကမ္ဘာပတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကို ခုနှစ်နာမည်ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေနဲ့ အတိအကျပြောပြသူကတော့အသက်၈၃ နှစ်အရွယ်အဘွား ဒေါ်တင်တင်စိန်ပါ။ခဲရောင်ချိတ်လုံချည်၊ခဲရောင်အင်္က࿿ျီကို ဖက်ရှင်ကျကျတွဲဖက်ဝတ်ဆင်ပြီးထိုင်ခုံမှာထိုင်ကာအေးအေးဆေးဆေးပြန်ပြောပြနေတဲ့အဘွားရဲ့မျက်လုံးတွေဟာ ခုချိန်ထိတောက်ပစူးရှနေဆဲပါ။
အဘွားရဲ့ မျက်လုံးတွေကတစ်ဆင့် ဖတ်ရှုခံစားနိုင်တာကတော့ အဘွားဟာ တစ်ချိန်ကထက်မြက်တကြွ်ကတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာ သေချာတယ်ဆိုတာပါပဲ။”အဘွားကို အားလုံးက ဝိုင်းတားကြတယ်။ဘာလို့သွားမှာလဲ မိန်းမတန်မဲ့နဲ့ အိမ်မှာနေတာ မဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲဒီခေတ်ကပိုဆိုးတယ်”ဆိုပြီးအဘွားတင်တင်စိန်က စပြောပါတယ်။အားလုံးဝိုင်းတားတဲ့ကြားက ထက်မြက်တဲ့အဘွားဟာသူ့အမျိုးသားနဲ့အတူသူ့တို့ဇနီးမောင်နှံ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းရအောင်သွားခဲ့တဲ့ဒီကမ္ဘာပတ်ခရီးဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့သမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တာအမှန်ပါ။
ထောင်ပိုင်ကြီး မစ္စတာ စကင်နာ(Mr. Skinner) နဲ့ ဒေါ်လှမေတို့ကနေ ၁၉၃၅ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ အဘွားတင်တင်စိန်ဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းကအားကစားရောပညာရေးဘက်မှာပါ ထူးချွန်သူပါ။ဆယ်တန်းကိုဘာသာစုံဂုဏ်ထူး ခုံနံပါတ် ၁ (သရက်မြို့နယ်)နဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၃ ခုနှစ်မှာသရက်မြို့ရဲ့မယ်လည်းဖြစ်ခဲ့သူပါ။ပညာရေးမှာလည်းတော်သလိုရုပ်ရည်ချောမောပြီးမယ်ဘွဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အဘွားဟာမယ်ဘွဲ့ရတဲ့၁၉၅၃ ခုနှစ်မှာပဲအပျော်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်ဝါသနာပါတဲ့ သစ်တောအရေးပိုင်ဦးဘတုတ်နဲ့အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပါတယ်။အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ကိုပြောင်းနေရင်းထီးတန်းကောလိပ်မှာအီကိုမေဂျာနဲ့ ကျောင်းတက်ခဲ့ရင်းသမီးအကြီးဆုံးမွေးပါတယ်။သမီးငယ်ကိုမွေးဖွားပြီးခြောက်လအကြာ ၁၉၅၅ ခုနှစ်မှာသူတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခရီးကို စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကန္တာရထဲမှာဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်သွားရင်း လူမျိုးစုတစ်စုနဲ့တွေ့ဆုံကာအဖမ်းခံခဲ့ရပြီးအသတ်ခံရမလိုအထိ ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့”အဘွားတို့နှစ်ယောက်စလုံးကသွားချင်လာချင် စူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေရှိတယ်။ဗမာတစ်ပြည်လုံး ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်တွေးရင်းကတစ်ကမ္ဘာလုံးပတ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အတွေးရပြီးခရီးစဉ်စခဲ့ကြတာ။အဘွားတို့မှာပိုက်ဆံလည်းမရှိဘူး။ကမ္ဘာကိုခြေလျင်ပတ်လို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ဘာနဲ့ပတ်ကြမလဲဆိုတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့ပတ်မယ်ဆိုတွေးမိပြီးမုန့်ဟင်းခါးတစ်ပွဲ ၁၀ ပြားခေတ်မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကအကျန်နံပါတ်က က-၄၅၈၁ မော်တော်ဆိုင်ကယ်အစုတ်ကြီးကိုဗမာငွေ ၅၀ဝ ပေးဝယ်တယ်။ ပြီးတော့ ပြန်ပြင်ပြီး ခရီးစဉ်ဆွဲခဲ့ကြတယ်”လို့သူတို့ခရီးစဉ်အစကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာပြောပြပါတယ်။
ကမ္ဘာပတ်ချင်တဲ့အတွေးဆိုတာလူတော်တော်များများမှာရှိတတ်ကြပေမဲ့အတွေးအတိုင်းလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဆိုတာ အင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်။အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးဆိုရင်ဘယ်လိုနေထိုင်ပြောဆိုသင့်တယ်ဆိုတဲ့ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေအောက်က ရုန်းထွက်ဖို့ ခက်ခဲနေသေးတဲ့ ခုနှစ်ပိုင်းခြားကာလတွေဆီမှာပေါ့။အဘွားတင်တင်စိန်နဲ့အဘိုးဦးဘတုတ်တို့ကတော့ သူတို့ရဲ့အတွေးကိုဖြစ်မြောက်အောင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြသူတွေပါ။
သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ခရီးစဉ်ကို ၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှာ မြန်မာပြည်မြောက်ဘက်လီဒိုလမ်းကသွားဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ရေကြီးပြီးလမ်းတွေပျက်နေကာသူပုန်တွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ဖျက်လိုက်ရပါတယ်။ကြားထဲမှာအဘိုးဦးဘတုတ်လည်းကျန်းမာရေးမကောင်းတာကြောင့်စက်တင်ဘာ၂၉ ရက်မှ လက်တွေ့ စနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ခရီးစဉ်မစခင်အဘွားက Nation သတင်းစာတိုက်ကို သွားကာ သူတို့သတင်းကို ပြောခဲ့တာမို့ Nation သတင်းစာမှာသူတို့နှစ်ဦးကမ္ဘာပတ်မယ့်သတင်းဖော်ပြခံခဲ့ရပါတယ်။သင်္ဘ࿿ောလက်မှတ်တွေဝယ်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဘိုးဦးဘတုတ်နေပြန်ကောင်းပြီးသုံးရက်အကြာမှာပဲ ဟူဂလီမြစ်ကိုသင်္ဘ࿿ောနဲ့သုံးရက်ကြာဖြတ်ကာကာလကတ္တားမြို့ကနေ ခရီးစဉ်ကို စခဲ့ကြတာပါ။
စစချင်းမှာပဲ “ကာလကတ္တားရောက်တော့တင်သွင်းခွင့်ပါမစ် မပါလို့ ဆိုင်ကယ်သိမ်းလိုက်ပြီပြောတယ်။မြန်မာပြည်ကနေ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကြီးကိုထုတ်တော့လည်းမြန်မာပြည်ပြန်ယူခဲ့ပါမယ်ဆိုတဲ့အာမခံလက်မှတ်ထိုးရတယ်။West Benglal မှာ အိန္ဒိယက မော်တော်ဆိုင်ကယ်အနေနဲ့ပြန်မှတ်ပုံတင်ပြီးWBM/ 4098 BI(British India) နဲ့မှကမ္ဘာပတ်ခွင့်ရတာ။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်အတွက်အဝင်အထွက်ပတ်စ်ပို့သဘောမျိုး Carnay de Passages ဆိုတဲ့မှတ်ပုံတင်စာအုပ်လုပ်အိန္ဒိယဆိုင်ကယ်အနေနဲ့မှတ်ပုံတင်ပြီးမှကမ္ဘာပတ်ရတာ။ကာလကတ္တားမှာ နှစ်လကြာခဲ့တယ်”လို့စစချင်းတွေ့တဲ့သူတို့ရဲ့ အခက်အခဲကို ပြောပါတယ်။
အဲဒီကနေ ပထမဆုံး ဗုဒ္ဓဂယာသွားပြီးGrand Trunck road ဆိုတဲ့အာရှရဲ့ ရှေးအကျဆုံးနဲ့အရှည်ဆုံးလမ်းမကြီးကနေ နယူးဒေလီကို သွားခဲ့ကြတာပါ။နယူးဒေလီသတင်းစာမှာကမ္ဘာလှည့်ဇနီးမောင်နှံဆိုပြီးပါလာတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ဂျဝါဟာလာနေရူးက လက်ခံတွေ့ဆုံကာLok Shaba လွှတ်တော်တက်ခဲ့ရဖူးတယ်လို့လဲ အဖွားကပြောပါတယ်
ဘာသာရေးတရားတွေလည်းဟောပြောလေ့လာတဲ့ အဘွားတင်တင်စိန်ဟာဒီခရီးစဉ်မှာဘာသာကြီးလေးခုရဲ့အဓိကကျတဲ့ အခြေခံနေရာတွေကိုလည်းရောက်အောင်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီအချိန်ကကမ္ဘာ့ဒုတိယလူဦးရေအများဆုံးဖြစ်ပြီးလူမျိုးစုပေါင်း၃၈၅ မျိုးနဲ့ ဘာသာပေါင်းများစွာရှိတဲ့အိန္ဒိယမှာဟိန္ဒူဘာသာရဲ့အစဟတ်နဝါရိုကီဘာသာကိုလေ့လာဖို့ဟိမဝန္တာတောင်တန်းဆီလည်းအရောက်သွားခဲ့သူပါ။အဲဒီမှာအောက်ကချတောင်ပို့ဖြစ်နေပြီးအပေါ်ပိုင်းလေးသာမြင်ရတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ခံစားမှုမရှိတော့တဲ့စိတ်လွန်ပညာကျင့်စဉ်ကျင့်နေတဲ့ဆာဒူးကြီးတွေလည်းတွေ့ခဲ့တယ်လို့ အဘွားက ပြန်ပြောင်းပြောပြပါတယ်။
“အိန္ဒိယခရီးစဉ်မှာဂျဝါဟာလာနေရူး၊နောက်ဖြစ်မယ့်ဝန်ကြီးချုပ် အင်ဒီရာဂန္ဓီအပြင်သူ့သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဆန်ဂျေးဂန္ဓီနဲ့ရာဂျေးဂန္ဓီတို့နဲ့ပါခင်ခဲ့သေးတယ်။Indian Express Newspaper ပိုင်ရှင်Feros Kham နဲ့လည်းရင်းနှီးသွားတယ်။ သူကအဘွားတို့ကို သတင်းစာတိုက်ကအမှောင်ခန်းကိုပေးသုံးတယ်။ညဘက်မှာ ဓာတ်ပုံကူး။နေ့ခင်းဘက်ဆို ဦးဘတုတ်က ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးအဘွားကဓာတ်ပုံလိုက်ရောင်းရတယ်။အဲဒီအချိန်ကအဘွားအသက်က ၁၈ နှစ်ဆိုတော့ရည်းစားစကားအပြောခံရတာတွေလည်း ရှိတယ်။ပိုက်ဆံလည်းသိပ်မပါတော့ရောက်တဲ့နေရာမှာအချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေဝင်လုပ်ရတာတွေလည်းရှိတယ်” လို့ပြုံးရင်းပြောတယ်။သူ့အပြုံးတွေနဲ့အတူသူ့စိတ်တွေကလည်းတက်ကြွပျော်ရွှင်စွာကမ္ဘာပတ်ခဲ့တဲ့ ၁၈ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးလေးဆီပြန်ရောက်နေပုံပါပဲ။
နယူးဒေလီမှာဂျဝါဟာလာနေရူးကထောက်ခံပေးတဲ့အတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံတော်သမ္မတက အိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ“The First Travellers from Asia” ဆိုပြီး ဂုဏ်ထူးဘွဲ့ထူးတွေ ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယမှာနာမည်ကြီးသွားတဲ့အတွက်ဦးနုနဲ့ ဒေါ်မြရီကအိန္ဒိယအထိလိုက်လာပြီးဂုဏ်ပြုပေးရင်း အော်တိုစာအုပ်ထဲမှာဦးနုက အောင်ပါစေ မောင်နုဆိုပြီး လက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့တဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။
နယူးဒေလီကနေဆင်မလား၊မစ်ဇိုရီ၊ဒေဒါဒွန်းကနေဟိမဝန္တာအထိသွားပြီးဂင်္ဂ࿿ါမြစ် မြစ်ဖျားခံရာဒေသ၊အဲဒီကနေဟိမဝန္တာတောင်တန်းတွေဆီနောက် အိန္ဒိယ၊ပါကစ္စတန်၊ခိုင်ဘာပတ်စ်နဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုပါ ဖြတ်သွားခဲ့ကြတာပါ။အဲဒီကနေ ဆီးနှင်းတွေတအားလွှမ်းလို့ ပြန်ပတ်လာပြီးပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ကျူးတားမြို့ကနေ ပြန်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျူးတာကနေ ကရာချိ၊ အီရန်နဲ့အဲဒီကနေ အာရေဗီယန်ပင်လယ်ကို SS Drakara သင်္ဘာနဲ့ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်အိုမန်နိုင်ငံမတ်စကက်၊ဒူဘိုင်း၊ကူဝိတ်၊အီရတ်ကိုကျော်ပြီးဘဂ္ဂဒက်ကို ရောက်သွားတဲ့အခါ ဘုရင်King Faisal II ကအတွေ့ခံခဲ့ပြီးအာရပ်နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကိုဗီဇာအခမဲ့ဝင်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။အဲဒီကနေဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံကိုရောက်ပြီး ဘုရင်Saudနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေး တယ်။
နာမည်ကျော်ဟာ့ဂ်ျမွတ်စလင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရှိတဲ့နေရာနားထိ ရောက်ခဲ့ပြီးမွတ်စလင်မဟုတ်ရင်ပေးမသွားတာကြောင့်ပေးသွားတဲ့မြို့တွေဖြစ်တဲ့မက္ကာ၊မက်ဒီနာနဲ့ဂျက်ဒါမြို့အထိရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။”ဆော်ဒီအာရေဗျရနိုင်ငံတွေကိုနှံ့အောင်သွားခဲ့ပြီးအဲဒီတစ်လျှောက်မှာဘုရင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ရသလို တအားကြမ်းပြီးဥပဒေမဲ့နေတတ်တဲ့လူတန်းစားတွေလည်းတွေ့ရတယ်”လို့လည်းအဘွားက ပြောပါတယ်။ဆော်ဒီနိုင်ငံကနေ ဂါဇာ၊အီဂျစ်ကိုအရောက်သွားခဲ့ကာပိရမစ်တွေ မြင်ခဲ့ရသလို ရှေးဟောင်းမြို့တွေလည်းရောက်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ်ဆီးရီးယား၊ဂျော်ဒန်ကိုဖြတ်ကျော်ကာဂျော်ဒန်ဘုရင် ဟူစိန်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။ဂျော်ဒန်ကနေဒါမတ်စကတ်ကိုဖြတ်ကာဖလောရင့်စ်တောင်တန်းတွေဆီရောက်ပြီးဝက်ဝံကြီးတွေနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့ရတာမို့ဆိုင်ကယ်ကြီးကိုစက်ခဏခဏရပ်ကာ ဝက်ဝံတွေအနားကထွက်သွားတဲ့အထိအသက်တောင်မရှူရဲဘဲငြိမ်စောင့်နေခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော်ရုံလူမတွေ့ကြုံဖူးတဲ့တောတောင်တွေကိုဆိုင်ကယ်တစ်စင်းနဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖြတ်ရင်း တောကောင်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အထိပါပဲ။
သူတို့သွားနေတဲ့ခရီးတစ်လျှောက်မှာပိုက်ဆံလိုတဲ့အခါအချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ဖူးသလိုကမ္ဘာပတ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို တခြားနိုင်ငံတွေကသတင်းစာတွေမှာဆောင်းပါးတွေရေးတာတစ်မျိုးရေဒီယိုကနေအသံလွှင့်စကားပြောပေးတာတွေတစ်သွယ် လုပ်ရင်းပိုက်ဆံရှာကာသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုစိတ်တူကိုယ်တူ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြတာပါ။တူရကီကနေဂရိ၊အယ်လ်ဘေးနီးယား၊ယူဂိုဆလားဗီးယားရောက်တော့ဆိုင်ကယ်ပျက်သွားတာကြောင့်ဦးဘတုတ်ကဆိုင်ကယ်ပြင်ဖို့သွားပြီးအဘွားဒေါ်တင်တင်စိန်ကတော့ရထားနဲ့ ရှေ့ဆက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။
သွားရင်းလမ်းမသိလို့မေးရင်းသွားရင်းနဲ့ဒေသခံတွေနဲ့အဘွားကြားမှာဘာသာစကားမပေါက်တော့ဘဲရဲစခန်းရောက်ပြီး အချုပ်ခန်းထဲထည့်လိုက်တယ်။နောက်တော့မှစခန်းမှုးရောက်လာပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ သံရုံးကိုခေါ်ခိုင်းကာသံရုံးအကူအညီ ယူခဲ့ရပါတယ်။သူ့တို့ခရီးတစ်လျှောက်မှာနေ့ဘက်မှာအရည်ပျော်မလိုပူပြီးညဘက်ဆိုအရိုးကွဲမတတ်အေးတဲ့သဲကန္တာရလည်း ရောက်ခဲ့သလိုကန္တာရထဲမှာဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်သွားရင်းလူမျိုးစုတစ်စုနဲ့တွေ့ဆုံကာအဖမ်းခံခဲ့ရပြီးအသတ်ခံရမလိုအထိဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောနိုင်တဲ့သူတစ်ဦးရောက်လာလို့အသက်ဘေးကလွတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့သွေးပျက်ဖွယ်အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ကန္တာရကိုဖြတ်ကာဥရောပတစ်ခွင်ဂျာမနီ၊ပြင်သစ်၊နော်ဝေ၊ဆွီဒင်၊ ဖင်လန်၊ဒိန်းမတ်၊နယ်သာလန်တစ်နိုင်ငံမှမကျန်အောင်အနှံ့ရောက်အောင်သွားခဲ့တဲ့အပြင်ဖင်လန်မြောက်ပိုင်းအက်စကီးမိုးတွေနေတဲ့ နေရာအထိရောက်အောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေါ်တင်တင်စိန်ကရှင်းပြပါတယ်။အဲဒီနေရာက၂၃ ၁/၂ဒီဂရီကမ္ဘာကြီးစောင်းနေတဲ့ နေရာဖြစ်တာမို့၂၄နာရီတစ်လျှောက်လုံးသုံးလလင်းနောက်ထပ်၂၄နာရီစလုံးသုံးလမှောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြင်သစ်ကနေဒိုဗာဆိပ်ကမ်းကိုသ‌ေင်္ဘာနဲ့ကူးကာအင်္ဂလန်ရောက်တော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီးကနင်တို့ငြိမ်ငြိမ်ကိုမနေဘူးငါတို့ကိုဒုက္ခပေးတာပဲဆိုကာရန်တွေတွေ့တာလည်း ခံခဲ့ကြရတယ်လို့ ရယ်ရယ်မောမော ပြောပါတယ်။
သူတို့ဖြတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများကသတင်းစာတွေနဲ့ အင်္ဂလန်သတင်းစာတွေမှာပါကမ္ဘာပတ်ခဲ့တဲ့သူတို့သတင်းတွေက ဟိုးလေးတကျော်ပါခဲ့တဲ့အပြင်ဘီဘီစီသတင်းဌာနကလည်း အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်တာဗျူးမှာအဲဒီအချိန်ကကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအင်ဂရစ်ဘာ့ဂ်မန်း၊အဆိုတော်တက်စ်ရီတာတို့နဲ့အတူတစ်နာရီကြာအောင်သူတို့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြခဲ့တာပါ။အင်္ဂလန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကနောက်ဆုံးဘုရင်ခံ ဆာဟူး ဘတ်ရန့်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါသေးတယ်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံကနေမှမြန်မာနိုင်ငံကိုပင်လယ်ကူးသင်္ဘ࿿ောတစ်တန်ရထားတစ်တန်နဲ့ဆိုင်ကယ်ကြီးကိုသယ်ရင်းအတွေ့အကြုံများစွာကိုပွေ့ဖက်ရင်းဒုတိယမြောက်သမီးလေးကိုယ်ဝန်လွယ်ထားတဲ့အဘွားတင်တင်စိန်နဲ့အဘိုးဦးဘတုတ်တို့တစ်နှစ်အကြာ ၁၉၅၆ခုနှစ်မှာဗမာပြည်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဘွားတင်တင်စိန်ဟာအသက်၄၀အရွယ်သူ့ခင်ပွန်းဦးဘတုတ်နဲ့အတူ တက်ညီလက်ညီခရီးသွားဖော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ရောဇနီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ပါအလုပ်တွေအတူတူလုပ်ရင်းကြုံတွေ့လာတဲ့ အခက်အခဲကိစ္စတိုင်းကိုလည်းဒိုးတူပေါင်ဖက်ဖြေရှင်းကျော်လွှားရင်းခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးလိုက်ပါခဲ့သူတစ်ဦးပါ။အဘွားတင်တင်စိန်က“တကယ်စွန့်စားမယ်ဆိုပျော်စရာကြီးပါ။အတွေ့အကြုံမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခတွေလည်းရောက်ခဲ့တာတွေ့ခဲ့ရတယ်။လမ်းဘေးက ဆင်းရဲသားကအစဝန်ကြီးချုပ်သမ္မတဘုရင်တို့နဲ့လည်းဆုံရတယ်” ဆိုပြီးသူ့ရဲ့အသက်နဲ့ပါရင်းခဲ့ရတဲ့ကမ္ဘာပတ်အတွေ့အကြုံအကြောင်းခုနှစ်၊ရက်၊လမကျန်မှတ်မိကာပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ခုထိလည်းအဘွားလန်းဆန်းနေဆဲဖြစ်သလိုအမြဲတမ်းပြုံးနေတတ်တဲ့အဘွားကိုကြည့်ရတာလည်းဖျတ်လတ်တကြွ်ကနေဆဲပါ။မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အဘွားတင်တင်စိန်ဟာနိုင်ငံတကာလှည့်ပြီးလည်းဗုဒ္ဓဘာသာတရားဟောတာတွေ လုပ်ခဲ့သလိုတရားပြဆရာမအဖြစ်ဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာပတ်ရင်းကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့နိုင်ငံပေါင်းစုံအကြောင်း စာအုပ်တွေရေးသားခဲ့ပါသေးတယ်။သူကြုံခဲ့ရတဲ့ဘာသာစကား အခက်အခဲတွေကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၂၀ကစတင်ကာ လူငယ်တွေကိုဘာသာစကားကိုးမျိုးပညာဒါနသင်ပေးတဲ့မနောရာမပညာဒါနစာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုစမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာဖွင့်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့စာအုပ်ပေါင်း၁၇အုပ်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တဲ့အဘွားတင်တင်စိန်ဟာအသက် ၈၃ နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမြတ်ပုဂံဟိုတယ်ရဲ့ပဲ့ကိုင်ရှင်အနေနဲ့သာအေးချမ်းစွာသူ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းလို့နေပါတော့တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်ကို မြှင်တင်ခဲ့သော ကမ္ဘာလှည့် တင်တင်စိန်သည်၂၀၂၀ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက် ည ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် သီလရှင်ဘဝဖြင့် တိမ်းပါး ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်
ကောင်းမြတ်ရာ Photo – Tin Tin Sein ကမ္ဘာလှည့်
မီးသတ်ကားအတိုက်ခံရလို့ရခဲ့တဲ့လျော် ကြေး‌ငွေကို မီးသတ်ဌာနကို ပြန်လည် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ကားပိုင်ရှင်
ယခုအကြောင်းအရာသည် ရွှေပြည်သာအရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ တင်ထားသော Post အား ပြန်လည်မျှေ၀ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်
(၂၅ . ၇ . ၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ကျွန်တော်တို့စခန်းမှ မီးသတ်ယာဉ်ဖြင့် ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တဘက်ယာဉ်ပိုင်ရှင်ဘက်အား လျှော်ကြေးငွေ သိန်း (၃၀) ကျပ် ပေးလျှော်ခဲ့ရပြီး
ယခုအခါ တစ်ဖက်ယာဉ်ပိုင်ရှင် ဘက်မှ လျှော်ကြေးငွေ သိန်း(၃၀)မှငွေ ကျပ် (၁၀)သိန်း အားပြန်လည် ပေးအပ် လှုဒါန်းကူညီခဲ့ပါသည်။
ယခုလို ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲတွေဘက်ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှူ့စာနာနားလည်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအထူးပင်ကျေးဇူး တင်ရှိပါသည်။
လက်ရှိစခန်းမှ ပျက်စီးသွားသောမီးငြိမ်းသတ်ယာဉ်ကိုလည်းယနေ့တွင် စတင်၍ ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ရန်အတွက်ကိုလည်းကားကြီးဝပ်ရှော့သို့ ပို့ဆောင်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
အရင်အတိုင်း စခန်းတွင် ပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်အတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
မီးသတ္ကားအတိုက္ခံရလို႔ရခဲ့တဲ့ေလ်ာ္ ေၾကး‌ေငြကို မီးသတ္ဌာန ကို ျပန္လည္ လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ ကားပိုင္ရွင္
ယခုအေၾကာင္းအရာသည္ ေ႐ႊျပည္သာအရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ တင္ထားေသာ Post အား ျပန္လည္ေမွ်၀ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္
(၂၅ . ၇ . ၂၀၂၀)ရက္ေန႕တြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔စခန္းမွ မီးသတ္ယာဥ္ျဖင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တဘက္ယာဥ္ပိုင္ရွင္ဘက္အား ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ သိန္း (၃၀) က်ပ္ ေပးေလွ်ာ္ခဲ့ရၿပီး
ယခုအခါ တစ္ဖက္ယာဥ္ပိုင္ရွင္ ဘက္မွ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ သိန္း(၃၀)မွေငြ က်ပ္ (၁၀)သိန္း အားျပန္လည္ ေပးအပ္ လႈဒါန္းကူညီခဲ့ပါသည္။
ယခုလို ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အခက္အခဲေတြဘက္ကိုျပန္လည္ၾကည့္ရႉ႕စာနာနားလည္ေပးတဲ့အတြက္လည္းအထူးပင္ေက်းဇူး တင္ရွိပါသည္။
လက္ရွိစခန္းမွ ပ်က္စီးသြားေသာမီးၿငိမ္းသတ္ယာဥ္ကိုလည္းယေန႕တြင္ စတင္၍ ျပန္လည္ျပင္ဆင္နိုင္ရန္အတြက္ကိုလည္းကားႀကီးဝပ္ေရွာ့သို႔ ပို႔ေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။
အရင္အတိုင္း စခန္းတြင္ ျပန္လည္တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိုင္ရန္အတြက္ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိပါသည္။
ပုဂံက ထူးထူးခြားခြား နာမည်တွေနဲ့ ဘုရားတွေဖြစ်တဲ့ မလာဖြစ်ဂူဘုရား နဲ့ မလုံးဖြစ်ဂူဘုရားတို့ရဲ့ သမိုင်း (ဖြစ်ရပ်မှန်)
တရုတ်ပြေးဂူဘုရားကြီး တံတိုင်း နှင့် မင်းဝိုင်းအစုတံတိုင်းအကြားရှိ လှည်း လမ်းအတိုင်း အနောက်မြောက်ဘက်သို့သွားသော်အနည်းငယ်ဝေးသော နေရာတွင်မလာဖြစ်ဂူဘုရားတံတိုင်းသို့ ရောက်ပေမည်။
မလာဖြစ်ဂူဘုရားမှာတံတိုင်း၏ အရှေ့ တောင်ထောင့်တွင်ရှိသည်။တံတိုင်းအနောက်ဘက်ထောင့်တွင်အုတ်ကျောင်းပျက်ကြီး ရှိလေသည်။မလာဖြစ် ဂူဘုရား (ဘုရားအမှတ် ၆၆၄)
ဂူအတွင်းရှိသောကျောက်စာအရ သက္က ရာဇ် ၆၃၆ခုတွင်တရုတ်ပြေးမင်း၏ အမတ်တျာသည်ဤအမနာမြေအရပ်တွင် တံတိုင်း ၊ဂူဘုရား ၊ ကျောင်းကြီး ၊ တန်ဆောင်း၊ကပ္ပိယကုဋီစသောအ ဆောက်အအုံများတည်ဆောက်ကြောင်း သိရလေသည်။
၎င်းကျောက်စာတွင်ပင် တကာကြီ မ္လဖြစ် ဟုပါရှိသောကြောင့် ထိုအမတ်တျာ၏ အမည်မှာ မ္လဖြစ် (မလဖြစ်)ဟုယူဆပြီး ဂူဘုရား၏အမည်ကိုလည်းမလာဖြစ် ဂူဘုရားဟုခေါ်ဝေါ်နေကြသည်မှာယနေ့တိုင်ပင်ဖြစ်သည်။
ဂူအတွင်းတွင် လှပသော ပန်းချီများမှာ ဆေးရောင်များမှေးမှိန်နေသော်လည်း အကြောင်းအရာကိုမြင်နိုင်ပါသေးသည်။ အမိုးကုန်းများတွင် ဆင်းတုပုံများအား ပန်းများနှင့် ရော၍ လှပစွာ ရေးဆွဲထားလေသည်။ ဂူအပြင်ဘက်တွင်လည်း လှပသော အင်္ဂတေပန်းများ များစွာရှိသေးသည်။
ဂူအနောက်မြောက်ဘက်တံတိုင်းတွင် အုတ်ကျောင်းအလတ်စားနှစ်ခု တောင် မြောက်တန်း၍ ရှိပြီး တောင်ဘက်ကျောင်းသည် လေးထောင့်မတ်မတ် အောက်နှစ်ခန်းအပေါ်ထပ်ရှိလေသည်။
မလုံးဖြစ်ဂူအတွင်းတွင် ကျောက်စာနှစ်ခုရှိရာ တခုမှာ သက္ကရာဇ် ၅၉၂ခုတွင် ကောင်းမှုရှင်သူဖရစ်လင်မယားသည် စရပ်လှမည်သော နေရာအရှေ့တွင် ဂူကျောင်းပြုလုပ်ကြောင်း ၊ ကျွန်လှူကြောင်း ၊သက္ကရာဇ် ၆၀၇ တွင်လည်း သူဖရစ်မယားက မြေလှူကြောင်းများပါရှိလေသည်။ အခြားကျောက်စာတခုတွင် သက္ကရာဇ် ၆၀၀၌ သံဗျင်သက်ရှည်ဆိုသူက စရပ်လှရှေ့တောကျောင်း၌ မြေလှူသည့်အကြောင်း ပါရှိလေသည်။
မလုံးဖြစ်ဂူဘုရားတွင်အပြင်ဘက် အင်္ဂ တေပန်းများ ကျန်သော်လည်း လက်ရာမှုကား မကောင်းလှပေ။
အတွင်းပန်းချီများအနက် အနောက် မျက်နှာ အမိုးမှ ပန်းဝိုင်းများသည် လက်ရာကောင်းမွန်၍ လှပစွာ ရှိလေသည်။ ဘာကြောင့် မလုံးဖြစ်ဂူဘုရားဟု ခေါ်သည့် အကြောင်းမူ မပါရှိချေ။
Credit ဦးဗိုကေ၏ ပုဂံသုတေသနလမ်းညွှန်စာအုပ်မှ
ပုဂံက ထူးထူးျခားျခား နာမည္ေတြနဲ႕ ဘုရားေတြျဖစ္တဲ့ မလာျဖစ္ဂူဘုရား နဲ႕ မလုံးျဖစ္ဂူဘုရားတို႔ရဲ႕ သမိုင္း (ျဖစ္ရပ္မွန္)
တ႐ုတ္ေျပးဂူဘုရားႀကီး တံတိုင္း ႏွင့္ မင္းဝိုင္းအစုတံတိုင္းအၾကားရွိ လွည္း လမ္းအတိုင္း အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔သြားေသာ္ အနည္းငယ္ေဝးေသာ ေနရာတြင္ မလာျဖစ္ဂူဘုရား တံတိုင္းသို႔ ေရာက္ေပမည္။
မလာျဖစ္ဂူဘုရားမွာတံတိုင္း၏ အေရွ႕ ေတာင္ေထာင့္တြင္ရွိသည္။တံတိုင္းအေနာက္ဘက္ေထာင့္တြင္အုတ္ေက်ာင္းပ်က္ႀကီး ရွိေလသည္။မလာျဖစ္ ဂူဘုရား (ဘုရားအမွတ္ ၆၆၄)
ဂူအတြင္းရွိေသာေက်ာက္စာအရ သကၠ ရာဇ္ ၆၃၆ခုတြင္တ႐ုတ္ေျပးမင္း၏ အမတ္တ်ာသည္ဤအမနာေျမအရပ္တြင္ တံတိုင္း ၊ဂူဘုရား ၊ ေက်ာင္းႀကီး ၊ တန္ေဆာင္း၊ကပၸိယကုဋီစေသာအ ေဆာက္အအုံမ်ားတည္ေဆာက္ေၾကာင္း သိရေလသည္။
၎ေက်ာက္စာတြင္ပင္ တကာႀကီ မႅျဖစ္ ဟုပါရွိေသာေၾကာင့္ ထိုအမတ္တ်ာ၏ အမည္မွာ မႅျဖစ္ (မလျဖစ္)ဟုယူဆၿပီး ဂူဘုရား၏အမည္ကိုလည္းမလာျဖစ္ ဂူဘုရားဟုေခၚေဝၚေနၾကသည္မွာယေန႕တိုင္ပင္ျဖစ္သည္။
ဂူအတြင္းတြင္ လွပေသာ ပန္းခ်ီမ်ားမွာ ေဆးေရာင္မ်ားေမွးမွိန္ေနေသာ္လည္း အေၾကာင္းအရာကိုျမင္နိုင္ပါေသးသည္။ အမိုးကုန္းမ်ားတြင္ ဆင္းတုပုံမ်ားအား ပန္းမ်ားႏွင့္ ေရာ၍ လွပစြာ ေရးဆြဲထားေလသည္။ ဂူအျပင္ဘက္တြင္လည္း လွပေသာ အဂၤေတပန္းမ်ား မ်ားစြာရွိေသးသည္။
မလာျဖစ္ဂူဘုရား တံတိုင္း၏ ေျမာက္ဘက္ကပ္၍ မလုံးျဖစ္ ဂူဘုရားတံတိုင္း ရွိေလသည္။ တံတိုင္းမွာ မလာျဖစ္ထက္ ပို၍က်ယ္ဝန္းၿပီး မလုံးျဖစ္ဂူဘုရားမွာ ေတာင္ဘက္တံတိုင္း အလယ္ေလာက္တြင္ ကပ္၍ ရွိေလသည္။
ဂူအေနာက္ေျမာက္ဘက္တံတိုင္းတြင္ အုတ္ေက်ာင္းအလတ္စားႏွစ္ခု ေတာင္ ေျမာက္တန္း၍ ရွိၿပီး ေတာင္ဘက္ေက်ာင္းသည္ ေလးေထာင့္မတ္မတ္ ေအာက္ႏွစ္ခန္းအေပၚထပ္ရွိေလသည္။
မလုံးျဖစ္ဂူအတြင္းတြင္ ေက်ာက္စာႏွစ္ခုရွိရာ တခုမွာ သကၠရာဇ္ ၅၉၂ခုတြင္ ေကာင္းမႈရွင္သူဖရစ္လင္မယားသည္ စရပ္လွမည္ေသာ ေနရာအေရွ႕တြင္ ဂူေက်ာင္းျပဳလုပ္ေၾကာင္း ၊ ကြၽန္လႉေၾကာင္း ၊သကၠရာဇ္ ၆၀၇ တြင္လည္း သူဖရစ္မယားက ေျမလႉေၾကာင္းမ်ားပါရွိေလသည္။ အျခားေက်ာက္စာတခုတြင္ သကၠရာဇ္ ၆၀၀၌ သံဗ်င္သက္ရွည္ဆိုသူက စရပ္လွေရွ႕ေတာေက်ာင္း၌ ေျမလႉသည့္အေၾကာင္း ပါရွိေလသည္။
မလုံးျဖစ္ဂူဘုရားတြင္အျပင္ဘက္ အဂၤ ေတပန္းမ်ား က်န္ေသာ္လည္း လက္ရာမႈကား မေကာင္းလွေပ။
အတြင္းပန္းခ်ီမ်ားအနက္ အေနာက္ မ်က္ႏွာ အမိုးမွ ပန္းဝိုင္းမ်ားသည္ လက္ရာေကာင္းမြန္၍ လွပစြာ ရွိေလသည္။ ဘာေၾကာင့္ မလုံးျဖစ္ဂူဘုရားဟု ေခၚသည့္ အေၾကာင္းမူ မပါရွိေခ်။
Credit ဦးဗိုေက၏ ပုဂံသုေတသနလမ္းၫႊန္စာအုပ္မွ
“ပိုစတာမှာမြင်ရတဲ့ ဝတ်စုံ​တွေ​လောက်ကြည့်ပြီး အကဲမဖြတ်​စေချင်ပါဘူး” လို့ပြောလာတဲ့ ခါရာ
သရုပ်​ဆောင် ခါရာ ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ထားတဲ့ ရင်ခုန်သံ ၇၄ ရက် ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ မကြာခင်မှာ ထုတ်လွှင့်ပြသ​တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ teaser video နဲ့ character poster ​တွေဟာလည်း မကြာ​သေးခင် ရက်ပိုင်းအတွင်းကမှ ထွက်ရှိလာခဲ့ပြီး ပရိသတ်​တွေကြားမှာ ​ရေပန်းစား​နေပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဒီဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ အဓိက သရုပ်​ဆောင် ခါရာရဲ့ ဇာတ်လမ်းထဲက ကာရိုက်တာ နဲ့ အဝတ်အစား ဒီဇိုင်းဟာ ပရိသတ်​တွေကြားမှာ အ​တော်​လေး လူ​ပြောများ​နေတာပါ။
” ဒီဇာတ်လမ်းတွဲက​တော့ ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်က ကျွန်​တော်ရိုက်ထားတာပါ။ အစက​တော့ သင်္ကြန်မတိုင်ခင် လွှင့်မလို့​ပေါ့​​နော်။ ဒီနှစ်က သင်္ကြန်ကလည်း မလုပ်ဖြစ်​တော့ သိပ်မတိုက်ဆိုင်သလိုဖြစ်သွားတာ​ပေါ့။ အမှန်​​တော့ ကိုယ်​တွေက သင်္ကြန်အ​ငွေ့အသက်ပုံစံမျိုး​လေးရိုက်ပြထားတာ။ ဇာတ်လမ်းတွဲက ဇာတ်ညွှန်း​​ရော ၊ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံစံ​ရော ၊ အဝတ်အစားဒီဇိုင်း​တွေပါ ဆန်းသစ်တယ်။
ကျွန်​တော်တို့ စိတ်ကူးထဲမှာ လွတ်လပ်စွာဖန်တီးထားပြီး​တော့ မြန်မာရဲ့ အ​ငွေ့အသက်လည်း​ပျောက်မသွား​အောင် ဒီဇိုင်နာနဲ့ ​​သေချာတိုင်ပင်ပြီး ချုပ်ထားတာ။ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကို ကြည့်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ ကျွန်​​တော်တို့ ဘာ​တွေလုပ်ထားလဲ ၊ကျွန်​တော်တို့ ဘယ်လို​တွေ​သေချာဖန်တီးထားလဲ ဆိုတာ မြင်​တွေ့ရမှာပါ။​ ​လော​​လောဆယ်မှာ​တော့ ပိုစတာမှာမြင်ရတဲ့ ဝတ်စုံ​တွေ​လောက်ကြည့်ပြီး အကဲမဖြတ်​စေချင်ပါဘူး” လို့ ခါရာက ​ပြောပါတယ်။
ရင်ခုန်သံ ၇၄ ရက် ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက ခါရာရဲ့ အဝတ်အစားဒီဇိုင်းကို​​တော့ ဒီဇိုင်နာ သျှတရ က စီစဥ်ချုပ်လုပ်​ပေးထားတာဖြစ်ပြီး ကျပ်သိန်းရာ​နဲ့ချီ အကုန်ချခံချုပ်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
“ပိုစတာမွာျမင္ရတဲ့ ဝတ္စုံ​ေတြ​ေလာက္ၾကည့္ၿပီး အကဲမျဖတ္​ေစခ်င္ပါဘူး” လို႔ေျပာလာတဲ့ ခါရာ
သ႐ုပ္​ေဆာင္ ခါရာ ပါဝင္သ႐ုပ္​ေဆာင္ထားတဲ့ ရင္ခုန္သံ ၇၄ ရက္ ဇာတ္လမ္းတြဲဟာ မၾကာခင္မွာ ထုတ္လႊင့္ျပသ​ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။အဆိုပါဇာတ္လမ္းတြဲရဲ႕ teaser video နဲ႔ character poster ​ေတြဟာလည္း မၾကာ​ေသးခင္ ရက္ပိုင္းအတြင္းကမွ ထြက္႐ွိလာခဲ့ၿပီး ပရိသတ္​ေတြၾကားမွာ ​ေရပန္းစား​ေနပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ဒီဇာတ္လမ္းတြဲရဲ႕ အဓိက သ႐ုပ္​ေဆာင္ ခါရာရဲ႕ ဇာတ္လမ္းထဲက ကာ႐ိုက္တာ နဲ႔ အဝတ္အစား ဒီဇိုင္းဟာ ပရိသတ္​ေတြၾကားမွာ အ​ေတာ္​ေလး လူ​ေျပာမ်ား​ေနတာပါ။
” ဒီဇာတ္လမ္းတြဲက​ေတာ့ ကိုဗစ္မျဖစ္ခင္က ကြၽန္​ေတာ္႐ိုက္ထားတာပါ။ အစက​ေတာ့ သႀကၤန္မတိုင္ခင္ လႊင့္မလို႔​ေပါ့​​ေနာ္။ ဒီႏွစ္က သႀကၤန္ကလည္း မလုပ္ျဖစ္​ေတာ့ သိပ္မတိုက္ဆိုင္သလိုျဖစ္သြားတာ​ေပါ့။ အမွန္​​ေတာ့ ကိုယ္​ေတြက သႀကၤန္အ​ေငြ႕အသက္ပုံစံမ်ိဳး​ေလး႐ိုက္ျပထားတာ။ ဇာတ္လမ္းတြဲက ဇာတ္ၫႊန္း​​ေရာ ၊ ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ပုံစံ​ေရာ ၊ အဝတ္အစားဒီဇိုင္း​ေတြပါ ဆန္းသစ္တယ္။
ကြၽန္​ေတာ္တို႔ စိတ္ကူးထဲမွာ လြတ္လပ္စြာဖန္တီးထားၿပီး​ေတာ့ ျမန္မာရဲ႕ အ​ေငြ႕အသက္လည္း​ေပ်ာက္မသြား​ေအာင္ ဒီဇိုင္နာနဲ႔ ​​ေသခ်ာတိုင္ပင္ၿပီး ခ်ဳပ္ထားတာ။ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုလုံးကို ၾကည့္လိုက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ကြၽန္​​ေတာ္တို႔ ဘာ​ေတြလုပ္ထားလဲ ၊ကြၽန္​ေတာ္တို႔ ဘယ္လို​ေတြ​ေသခ်ာဖန္တီးထားလဲ ဆိုတာ ျမင္​ေတြ႕ရမွာပါ။​ ​ေလာ​​ေလာဆယ္မွာ​ေတာ့ ပိုစတာမွာျမင္ရတဲ့ ဝတ္စုံ​ေတြ​ေလာက္ၾကည့္ၿပီး အကဲမျဖတ္​ေစခ်င္ပါဘူး” လို႔ ခါရာက ​ေျပာပါတယ္။
ရင္ခုန္သံ ၇၄ ရက္ ဇာတ္လမ္းတြဲထဲက ခါရာရဲ႕ အဝတ္အစားဒီဇိုင္းကို​​ေတာ့ ဒီဇိုင္နာ သွ်တရ က စီစဥ္ခ်ဳပ္လုပ္​ေပးထားတာျဖစ္ၿပီး က်ပ္သိန္းရာ​နဲ႔ခ်ီ အကုန္ခ်ခံခ်ဳပ္လုပ္ထားတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
အချစ်ဦးကိုနှစ် ၃၀ သစ္စာရှိရှိစောင့်ခဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာကြီးရဲ့ လေးစားဖွယ်အချစ်
ပရိသတ်ကြီးရေ ခုခေတ်မှာ ၃ နှစ် ၃ မိုးစောင့်ပြီးချစ်တယ်ဆိုတာ ပုံပြင်လိုဖြစ်နေပါပြီနော်…ခုမြင်..ခုကြိုက်ခုကွဲ ဆိုသလို ခေတ်ရေစီးကြောင်းကလည်း ပြောင်းလဲနေတာပါ…အချစ်တစ်ခုနဲ့ပေါင်းဖက်နိုင်ဖို့ နှစ် ၃၀ စောင့်ခဲ့တဲ့သစ္စာရှိသူတစ်ယောက်အကြောင်းပြောပြရင် အံ့ဩကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်
“ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် နဲ့ ဒါရိုက်တာ ဇော်ထွန်းကတော့အသက် ၄၇ နှစ်အထိ လူ ပျိုကြီးဘဝနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့ပေမယ့်နှစ် ၃၀ အထိ စောင့်ခဲ့ရတဲ့ ငယ်ချစ်ဦးနဲ့ ပြန်တွေ့ချိန်မှာတော့လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အ ကြောင်း ဖွင့်ဟလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
“လူပျိုကြီး လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပေမယ့် အေးချမ်းတဲ့ မိသားစု ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ချင်လို့အသက် (၄၇) နှစ်မှာအိမ် ထောင်ပြုခဲ့တယ်ဇနီးသည်ကလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် (၃၀) လောက်ကကြိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့အချစ်ဦးပါသူ့ဆီမှာခင်ပွန်းဟောင်း နဲ့ ရခဲ့တဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ပါလာပေမယ့် ကိုယ့်သမီးအရင်းလေးလိုချစ်ပါတယ်”လို့ သရုပ်ဆောင်နဲ့ ဒါရိုက်တာ ဇော်ထွန်းကဆိုပါတယ်။
သမီးလေးနဲ့လည်းဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေတယ်လို့သိရပြီး ဦးဇော်ထွန်းကပရိသတ်တွေအတွက်လည်း တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကို လက်ဆောင်အနေနဲ့ ပြောလာခဲ့ပါသေးတယ် ဦးဇော်ထွန်းက ” လူဆိုတာသူ့အတ္တကိုဖြည့်စွမ်းပေးရင်ကိုယ့်အတ္တလည်း တဖြေးဖြေး ပြည့်လာမယ်လို့ကျနော် ငယ်ငယ်က ယုံကြည့်ထားတယ်လို့ စကားလက်ဆောင်ပေးထားခဲ့ပါတယ်
လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်တွေဟာ အပြင်မှာတော့ လူကြမ်းသူကြမ်းကြီးတွေမဟုတ်ကြောင်း ဦးကိုကိုဦး ဦးအောင်ခိုင်တို့နဲ့
အတူ ဦးဇော်ထွန်းကလည်းပြသလာခဲ့တာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ စိတ်ဝင်စားစရာ ဇာတ်လမ်းလေးမို့မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်နော်”
Source ; Shwe Yaung Myanmar
အခ်စ္ဦးကိုႏွစ္ ၃၀ သစၥာရွိရွိေစာင့္ခဲ့တဲ့ဒါရိုက္တာႀကီးရဲ႕ ေလးစားဖြယ္အခ်စ္
ပရိသတ္ႀကီးေရ ခုေခတ္မွာ ၃ ႏွစ္ ၃ မိုးေစာင့္ၿပီးခ်စ္တယ္ဆိုတာ ပုံျပင္လိုျဖစ္ေနပါၿပီေနာ္…ခုျမင္..ခုႀကိဳက္ခုကြဲ ဆိုသလို ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းကလည္း ေျပာင္းလဲေနတာပါ…အခ်စ္တစ္ခုနဲ႕ေပါင္းဖက္နိုင္ဖို႔ ႏွစ္ ၃၀ ေစာင့္ခဲ့တဲ့သစၥာရွိသူတစ္ေယာက္အေၾကာင္းေျပာျပရင္ အံ့ဩၾကမယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္
“႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ နဲ႕ ဒါရိုက္တာ ေဇာ္ထြန္းကေတာ့အသက္ ၄၇ ႏွစ္အထိ လူ ပ်ိဳႀကီးဘဝနဲ႕ ရပ္တည္ခဲ့ေပမယ့္ႏွစ္ ၃၀ အထိ ေစာင့္ခဲ့ရတဲ့ ငယ္ခ်စ္ဦးနဲ႕ ျပန္ေတြ႕ခ်ိန္မွာေတာ့လက္ထပ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့အ ေၾကာင္း ဖြင့္ဟလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္
“လူပ်ိဳႀကီး လုပ္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ထားေပမယ့္ ေအးခ်မ္းတဲ့ မိသားစု ဘဝကိုပိုင္ဆိုင္ခ်င္လို႔အသက္ (၄၇) ႏွစ္မွာအိမ္ ေထာင္ျပဳခဲ့တယ္ဇနီးသည္ကလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ (၃၀) ေလာက္ကႀကိဳက္ခဲ့ဖူးတဲ့အခ်စ္ဦးပါ
သူ႕ဆီမွာခင္ပြန္းေဟာင္း နဲ႕ ရခဲ့တဲ့ သမီးေလးတစ္ေယာက္ပါလာေပမယ့္ ကိုယ့္ သမီးအရင္းေလးလိုခ်စ္ပါတယ္”လို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္နဲ႕ ဒါရိုက္တာ ေဇာ္ထြန္းကဆိုပါတယ္။
သမီးေလးနဲ႕လည္းဆက္ဆံေရးအဆင္ ေျပတယ္လို႔သိရၿပီး ဦးေဇာ္ထြန္းကပရိသတ္ေတြအတြက္လည္း တန္ဖိုးရွိတဲ့စကားေလးတစ္ခြန္းကို လက္ေဆာင္အေနနဲ႕ ေျပာလာခဲ့ပါေသးတယ္ ဦးေဇာ္ထြန္းက ” လူဆိုတာသူ႕အတၱကိုျဖည့္စြမ္းေပးရင္ကိုယ့္အတၱလည္း တေျဖးေျဖး ျပည့္လာမယ္လို႔က်ေနာ္ ငယ္ငယ္က ယုံၾကည့္ထားတယ္လို႔ စကားလက္ေဆာင္ေပးထားခဲ့ပါတယ္
လူၾကမ္းသ႐ုပ္ေဆာင္ေတြဟာ အျပင္မွာေတာ့ လူၾကမ္းသူၾကမ္းႀကီးေတြမဟုတ္ေၾကာင္း ဦးကိုကိုဦး ဦးေအာင္ခိုင္တို႔နဲ႕အတူ ဦးေဇာ္ထြန္းကလည္းျပသလာခဲ့တာပါ ပရိသတ္ႀကီးေရ စိတ္ဝင္စားစရာ ဇာတ္လမ္းေလးမို႔မွ်ေဝေပးလိုက္ရပါတယ္ေနာ္”
ဘဝတိုး တက်စေမည့် နည်းလမ်း (၁၁) ချက်
၁။ ဘာလုပ်မလဲ အရင်စဉ်းစားပါ၊ စဉ်းစားပြီး မှလေ့လာပါ၊ လေ့လာပြီးမှလုပ်ဆောင်ပါ၊လုပ်ဆောင်ပြီးရင်လည်း ပြန် လည်သုံးသပ်ပါ။
၂။ ကိုယ်နေချင်တဲ့ အဆင့်ကိုကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်ပါ။
၃။ ကိုယ်မြင် သလောက်ပဲ ကိုယ်ရပါ လိမ့်မယ်။
၄။ မသိရင် မေးပါ။ မေးရင် အဖြေ ရပါတယ်။ တတ်ယောင်ကမ်း မလုပ် ပါနဲ့။
၅။ သင်ယူခြင်းဆိုတာဘဝတိုက်ပွဲ အတွက်လက်နက်ကောင်းတစ်ခုပါ။ များများသင်ယူလေလေကိုယ့်ဆီမှာတိုက်ပွဲ အတွက်လက်နက်များလေလေ။လက်နက်များလေလေအနိုင်ရဖို့ သေချာ လေလေပါပဲ။
၆။ အချိန်တွေကို အရင်းအနှီး လုပ်ပြီး ပညာတစ်ခုခု ရအောင်ယူပါ။အလကား အချိန်တွေကို ဖြုန်းတီး မပစ်ပါနဲ့။
၇။ ငွေကို အရင်းအနှီး အတွက်ပဲ သုံးပါ။ အလကားဖြုန်းမပစ် ပါနဲ့။
၈။ ချမ်းသာခြင်းဟာဘဝအဆုံး မဟုတ်ပါဘူး။ချမ်းသာခြင်းတွေ့မှ ဘဝစတာပါ။
၉။ ချမ်းသာခြင်းမျိုးစေ့ ဆိုတာ အရင်ဆုံး စိုက်ပျိုးရတယ် ပြုစု စောင့်ရှောက်ရတယ် ပြီးမှ ရိတ်သိမ်းလို့ရမယ်။
၁၀။ ပြင်းပြ တဲ့ဆန္ဒဟာ ဘဝရဲ့ သံလိုက် အိမ်မြောင်ပါပဲ။
၁၁။ မိမိ ရည်မှန်းချက်ကို ပုံဖော်သူသာ ဖြစ်ပါစေ။ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ပုံဖော်ခြင်း ခံရသူ မဖြစ်ပါစေနဲ့။
ဘဝတိုး တက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၁၁) ခ်က္
၁။ ဘာလုပ္မလဲ အရင္ စဥ္းစားပါ၊ စဥ္း စားၿပီး မွေလ့လာပါ၊ ေလ့လာၿပီးမွလုပ္ ေဆာင္ပါ၊လုပ္ေဆာင္ၿပီးရင္လည္း ျပန္ လည္သုံးသပ္ပါ။
၂။ ကိုယ္ေနခ်င္တဲ့ အဆင့္ကိုကိုယ္တိုင္ သတ္မွတ္ပါ။
၃။ ကိုယ္ျမင္ သေလာက္ပဲ ကိုယ္ရပါ လိမ့္မယ္။
၄။ မသိရင္ ေမးပါ။ ေမးရင္ အေျဖ ရပါတယ္။ တတ္ေယာင္ကမ္း မလုပ္ ပါနဲ႕။
၅။ သင္ယူျခင္းဆိုတာဘဝတိုက္ပြဲ အ တြက္လက္နက္ေကာင္းတစ္ခုပါ။ မ်ားမ်ားသင္ယူေလေလကိုယ့္ဆီမွာ တိုက္ပြဲ အတြက္လက္နက္မ်ားေလေလ။ လက္ နက္မ်ားေလေလ အနိုင္ရဖို႔ ေသခ်ာ ေလေလပါပဲ။
၆။ အခ်ိန္ေတြကို အရင္းအႏွီး လုပ္ၿပီး ပညာတစ္ခုခု ရေအာင္ယူပါ။အလကား အခ်ိန္ေတြကို ျဖဳန္းတီး မပစ္ပါနဲ႕။
၇။ ေငြကို အရင္းအႏွီး အတြက္ပဲ သုံးပါ။ အလကားျဖဳန္းမပစ္ ပါနဲ႕။
၈။ ခ်မ္းသာျခင္းဟာဘဝအဆုံး မဟုတ္ပါဘူး။ခ်မ္းသာျခင္းေတြ႕မွ ဘဝစတာပါ။
၉။ ခ်မ္းသာျခင္းမ်ိဳးေစ့ ဆိုတာ အရင္ဆုံး စိုက္ပ်ိဳးရတယ္ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ရတယ္ ၿပီးမွ ရိတ္သိမ္းလို႔ရမယ္။
၁၀။ ျပင္းျပ တဲ့ဆႏၵဟာ ဘဝရဲ႕ သံလိုက္ အိမ္ေျမာင္ပါပဲ။
၁၁။ မိမိ ရည္မွန္းခ်က္ကို ပုံေဖာ္သူသာ ျဖစ္ပါေစ။ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ပုံေဖာ္ျခင္း ခံရသူ မျဖစ္ပါေစနဲ႕။
၃ နှစ်လောက် ကြိတ်ပြီးကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်က Gay ဖြစ်နေလို့ တော်တော်ကြီး စိတ်ညစ်ခဲ့ရဖူးတဲ့အကြောင်းပြော လာတဲ့ ရွှေအိမ်စည်
ရွှေအိမ်စည်ကတော့ Model Show ပွဲတွေမှာ တောက်လျှောက်ပါဝင်နေသလို အလျင်းသင့်သလို အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့ပြည်သူချစ်အလှမယ်တစ်ဦးပါ။သူမရဲ့ခပ်ချေချေစကားပြောဟန်နဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ ဟန်ပန်က သူမကိုပိုမိုကျော်ကြားစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Model Show တစ်ခုမှာပြုလုပ်တဲ့ မီဒီယာတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုမှာတော့ ရွှေအိမ်စည်က သူမ ၃ နှစ်လောက်ကြိတ် Crush နေရတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်က Gay ဖြစ်နေလို့ တော်တော်ကြီး စိတ်ညစ်ခဲ့ရဖူးတယ်လို့ ဆိုလာခဲ့တာပါ။
ရွှေအိမ်စည်က “အရမ်းကြိုက်ခဲ့တဲ့ ကောင် လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ချောတော့အရမ်းကြွေခဲ့ရတာ။အရမ်းလည်းစော်ကြည် တယ်ပေါ့။နောက်မှ Gay ဖြစ်နေမှန်းသိလိုက်ရတာဘဝကြီးက တော်တော်စိတ်ညစ်စရာဖြစ်သွားတာ။သုံးနှစ်လောက် ကြိတ် Crush ခဲ့ပြီးမှဆိုတော့ တော်တော်ညစ်သွားတယ်”လို့ ဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သူ့အနေနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်လက်ထပ်ဖို့ကိုလည်းအနည်းဆုံးငါးနှစ်လောက်အထိ ဖြစ်လာဖို့မရှိသေးပဲ သေချာလေ့လာပြီးမှသာ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ဆုံးဖြတ်ချင်တယ်လို့ ဆိုလာခဲ့တာပါ။သူမအနေနဲ့အရမ်းကြီး အမြန်လက်ထပ်ဖို့ မလိုသလို အခုအောင်မြင်မှုအတိုင်းဆက်သွားနေလည်း စိတ်ပူစရာမရှိတဲ့ အတွက် အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ကိစ္စကြီးကို လောလောဆယ်မစဉ်းစားသေးဘူးလို့ ပြောဆိုလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ရွှေအိမ်စည်တစ်ယောက် Crush က Gay ဖြစ်နေလို့ ကြေကွဲခဲ့ရတဲ့အကြောင်း ပြောပြထားတာကို ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူမှုကွန်ယက်မှာလူပြောများနေတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးဖြစ်လို့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်
၃ ႏွစ္ေလာက္ ႀကိတ္ၿပီးႀကိဳက္ေနရတဲ့ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က Gay ျဖစ္ေနလို႔ ေတာ္ေတာ္ႀကီး စိတ္ညစ္ခဲ့ရဖူးတဲ့အေၾကာင္းေျပာ လာတဲ့ ေ႐ႊအိမ္စည္
ေ႐ႊအိမ္စည္ကေတာ့ Model Show ပြဲေတြမွာ ေတာက္ေလွ်ာက္ပါဝင္ေနသလို အလ်င္းသင့္သလို အႏုပညာလုပ္ငန္းေတြကိုလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ျပည္သူခ်စ္အလွမယ္တစ္ဦးပါ။သူမရဲ႕ခပ္ေခ်ေခ်စကားေျပာဟန္နဲ႕ယုံၾကည္မႈအျပည့္ရွိတဲ့ ဟန္ပန္က သူမကိုပိုမိုေက်ာ္ၾကားေစတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
Model Show တစ္ခုမွာျပဳလုပ္တဲ့ မီဒီယာေတြ႕ဆုံမႈတစ္ခုမွာေတာ့ ေ႐ႊအိမ္စည္က သူမ ၃ ႏွစ္ေလာက္ႀကိတ္ Crush ေနရတဲ့ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က Gay ျဖစ္ေနလို႔ ေတာ္ေတာ္ႀကီး စိတ္ညစ္ခဲ့ရဖူးတယ္လို႔ ဆိုလာခဲ့တာပါ။
ေ႐ႊအိမ္စည္က “အရမ္းႀကိဳက္ခဲ့တဲ့ ေကာင္ ေလးတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ေခ်ာေတာ့ အရမ္းေႂကြခဲ့ရတာ။အရမ္းလည္း
ေစာ္ၾကည္တယ္ေပါ့။ေနာက္မွ Gay ျဖစ္ေနမွန္းသိလိုက္ရတာဘဝႀကီးက ေတာ္ ေတာ္စိတ္ညစ္စရာျဖစ္သြားတာ။သုံးႏွစ္ေလာက္ ႀကိတ္Crush ခဲ့ၿပီးမွဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ညစ္သြားတယ္”လို႔ ဆိုလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
သူ႕အေနနဲ႕ မဂၤလာေဆာင္လက္ထပ္ဖို႔ကိုလည္းအနည္းဆုံးငါးႏွစ္ေလာက္အထိ ျဖစ္လာဖို႔မရွိေသးပဲ ေသခ်ာေလ့လာၿပီးမွသာ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်င္တယ္လို႔ ဆိုလာခဲ့တာပါ။သူမအေနနဲ႕အရမ္းႀကီး အျမန္လက္ထပ္ဖို႔ မလိုသလို အခု ေအာင္ျမင္မႈအတိုင္းဆက္သြားေနလည္း စိတ္ပူစရာမရွိတဲ့ အတြက္ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ ကိစၥႀကီးကို ေလာေလာဆယ္မစဥ္းစားေသးဘူးလို႔ ေျပာဆိုလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒါကေတာ့ ေ႐ႊအိမ္စည္တစ္ေယာက္ Crush က Gay ျဖစ္ေနလို႔ ေၾကကြဲခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပထားတာကို ျပန္လည္တင္ဆက္ေပးခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။လူမႈကြန္ယက္မွာလူေျပာမ်ားေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေလးျဖစ္လို႔မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္